स्वास्थ्य र शिक्षामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छौ : नगर प्रमुख उपाध्याय – Merokarnali
नेपाल सरकारको वि.सं.२०७३ फागुन २६ गतेको निर्णयअनुसार साबिकका ६ वटा गाविसहरू साताला, सिगौडी, कर्णाली, पिपलकोट,सिहासैन र । तिलेपाटालाई गाभेर निर्माण भएको आठबिस नगरपालिका हो । नगरपालिकामा ९ वटा वडा रहेका छन् । कुल १६८ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा फैलिएको यो नगरपालिका दैलेखका ११ वटा स्थानीय तहहरू मध्ये क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याका हिसाबले दोस्रो ठुलो स्थानीय तह हो । भौगोलिक हिसाबले बिकट र विकासको हिसाबले विकासोन्मुख अवस्थामा यो नगरपालिका रहेको छ । वि.स २०६८ सालको जनगणना अनुसार यस नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या २९ हजार २ सय २७ रहेको छ । कुल जमिनको ७७.३२ प्रतिशत अर्थात् १२ हजार ९ सय ८९ दशमलव ५४ हेक्टर भूभाग बनजंगलले ढाकेको यस नगरपालिका भित्र प्रशस्त मात्रामा खोलानाला तथा कर्णाली नदी रहेका छन् ।
मुख्यतया क्षेत्री , ब्राह्मण, ठकुरी, कामी जातिको बाहुल्यता रहेको यस नगरपालिकामा मगर, दमाईको पनि बसोबास रहेको छ भने केही सङ्ख्यामा अल्पसङ्ख्यक वादी जातिको पनि बसोबास रहेको छ । यस नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा हिन्दु, इसाई, मुस्लिम, बौद्ध धर्मावलम्वीहरु रहेका छन् । नगरपालिकामा जाक्सीकोट मालिका माई,अधिकारी, भैरव मन्दिर,थामा चौधेरा माई मन्दिर जस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका सम्पदाहरू रहेका । प्राकृतिक स्रोत साधनको रूपमा कर्णाली नदी,खोलानाला ,स्लेट खानी, प्रशस्त मात्रामा बनजंगल तथा जडीबुटी रहेको छ । यस नगरपालिका २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्या २९ हजार २ सय २७ रहेको छ । मुख्य गरी वनजंगल, वन पैदावार र कृषि तथा पशु उत्पादनलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत मानिने यस नगरपालिकाको रामाघाट, टुनीवगर र कर्णाली, खिडकीजिउला बजारलाई मुख्य ब्यापारिक केन्द्र मानिदै आएको छ । यातायातको सुविधा, भौगोलिक रूपमा मिलेको बस्ती ,मध्य पहाडी लोक मार्गको मेगा सिटि र कर्णाली राजमार्गमा पर्ने भएकोले यस नगरपालिकाको मुख्य केन्द्र वडा नं. ४ राकम कर्णालीमा कायम गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा नगरपालिकाका गरेका सामाजिक तथा पुर्वधार विकासका विषयमा नगर प्रमुख खड्गराज उपाध्याय सँग मेरो कर्णालीका सम्पादक कमल शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
१. स्थानीय सरकार गठन भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा के–के उपलब्धि भए ?
विशेष गरी हामी नगरपालिकामा निर्वाचित भए पश्चात् पूर्व विकासका पुर्वधारका विषयमा कुरा गर्दा तत्कालीन ६ वटा गाविस गाभेर वडा नः ९ मा बिभजान गरी नगरपालिका निर्माण भयो । नगरपालिका निर्माण गर्दा १,२,३,४,८ नम्बर वडामा सडक निर्माण भएको थियो भने वडा नः ५,६,७,९ वडामा हामीले सडक निर्माण गरेर अहिले सवारी साधन गुड्ने भएका छन् । खानेपानीको सवालमा अत्यतै समस्या भएको नगरपालिका हो । नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा खानेपानी पु¥याउन एक घर एक धारा अभियान सञ्चालन गर्नका लागि डिपिआर निर्माण गरेर काम गरिरहेको छौ । एकै पटक सबै बस्तीमा खानेपानी पु¥याउन नसक्ने भएका कारण केही वडामा खोनपानी योजना सञ्चालन गरेका छौ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको युवाहरूलाई रोजगारी र आयआर्जनमा जोड्नका लागि काम ग¥यौ । केही वडामा सफल भएको भए पनि केही वडामा भने काम हुन सकेन । यो आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन गरेर तीन सय युवालाई रोजगारीमा जोड्न लागेको छौ । त्यसमा कृषि,पशुपालन,बा्रखापालन,ओखर खेती, च्याउ खेती गर्नेका लागि युवाहरूलाई विभिन्न सिप मूलक तालीम दिने तयारी गरेका छौ ।
अर्को काम भनेको हामीले यो आर्थिक वर्षमा आठबिस नगरपालिकालाई विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य अनुरूप काम गरेको छौ । त्यही अनुसार आठबिस नगरपालिकाको वडा नः ८ तिलेपाटामा विद्युत विस्तार गर्ने र त्यहाँ बाट नगरपालिकाको सदरमुकाम राकमकर्णालीमा बिुद्यत जडान गर्ने लक्ष्य अनुरूप कर्णाली राजमार्गमा तानिएको लाइन बाट नगरपालिकाको वडा नः २ को साइखोला सब स्टेसन निर्माणका लागि जग्गाको ठेक्काको टेन्डर निकाल्ने तयारीमा छौ । त्यो सँग सँगै रिफेरस सेन्टर राख्ने र ५० जनालाई रोजगारीमा जोड्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौ ।
त्यसै गरी नेपाल सरकारले लिएको स्वास्थ्य नीति अनुसार यो नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्नका लागि टेन्डर प्रकाशन गर्ने तयारीमा छौ । त्यो सँगै स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण काम भनेको प्रदेश सरकार र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नगरपालिकाको समन्वयमा १०० शय्याको ट्रमा सेन्टर सहितको अस्पताल सञ्चालनका लागि डिपिआर निर्माण गरेर काम अगाडी बढाएको छौ भने एक जना डाक्टर बसेर यहाँ सेवा दिइराख्नु भएको छ । नगरपालिकाका नागरिकलाई स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि नगरपालिकाको १,२,५,६,७,८, सहरी स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरेका छौ ।
शिक्षाको क्षेत्रमा निर्वाचित हुनु अगाडी योजना मागेर शिक्षकलाई तलब खुवाउनु पर्ने बाध्यता थियो । अहिले कुनै पनि शिक्षक लाई तलब खुवाउनु पर्दैन । नगरपालिकाले आफै बजेट व्यवस्थापन गरेका छौ ।
२.स्थानीय सरकार गठन भएको ६ महिना भित्र नगरपालिकाको केन्द्र टुङ्गो लगाउनन पर्ने भए पनि अहिले सम्म किन हुन सकेन ।
हो तपाईँले भने अनुसार स्थानीय सरकार गठन भएको ६ महिना भित्र केन्द्रको टुगो लगाउनु पर्ने हो । स्थानीय सरकार गठन भए पछि धेरै पटक कार्यपालिकाको बैठकमा समेत नगरपालिकाको केन्द्र तोक्ने विषयमा छलफल ग¥यौ । सर्व सहमतिले निर्माण हुन सकेन । निर्णय गर्दा कार्यपालिकामा रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने हुन्छ हामी सँग त्यो छैन त्यस कारण पनि अहिले सम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । हामीले त्यसका विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेको छौ चाँडै टुगिएला भन्ने विश्वास मैले लिएको छ। ।
३ अहिले सम्मको काम गराई बाट तपाई र नागरिक कतिको सन्तुष्ट छन् ?
नगरपालिकाले गरेको विकास बाट जनता पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । नगरपालिकाको रवैया देखेर नगरपालिकाका नागरिक समेत एकै पार्टीलाई निर्वाचन गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । तर मैले आफ्नो निर्वाचनमा गरेको घोषणा पत्रका आधारमा हेर्न हो भने काम गरेको छु र मलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने जनताले के बुझेका छन् भने मेयरले काम गर्न खोज्दा खोज्दै पनि काम गर्न नदिएको भन्ने बुझेका छन् अव त्यसका लागि निर्वाचन नै विकल्प हो निर्वाचन भएपछि सबै कुरा प्रस्ट भइहाल्छ ।
४यो अवधिमा कस्ता खालका चुनौतीको सामना गर्नु प¥यो ?
यो अवधिमा चुनौती धेरै भोग्नु परेको छ । दैलेख त्यसमा पनि दुर्गमको नगरपालिका प¥यो । कर्मचारी आउन नमान्ने आएको कर्मचारी दुई चार दिनमै सुरुवा हुने रोग कारण हामीले जुन उपलब्धि हासिल गर्ने थियौ त्यो गर्न सकेनौ ।स्थानीय सरकारले बनाउनु पर्ने ऐन कानुन र कार्यविधि निर्माणमा पनि चुनौती भोग्नु प¥यो । अहिले पनि नगरपालिकामा कर्मचारी नहुँदा विगतमा सामाजिक परिचालकको काम गरेका कर्मचारीलाई वडाको जिम्मा दिएका छौ । अर्को चुनौती भनेको आफूले भने अनुसारको काम गर्न पाइएको छैन । नगरपालिकामा एकै दलको बहुमत छैन । बहुमत नहुँदाको समस्या कुनै पनि निर्णय सर्व सम्मत पनि गर्न नसकिने हुँदा काम गर्न निकै कठिन भएको छ ।
५.स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बिच काम गर्दा समन्वय कसरी गरिराख्नु भएको छ ?
सङ्घीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच सहकार्य सहअस्तित्व र समन्वय गर्ने जुन संविधानको मर्म छ त्यो अनुसार समन्वय हुन सकेको छैन । हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा भन्ने हो भने सरकारका मन्त्री जहाँ छन् त्यहाँ बजेट जाने रोग छ । समानुपातिक र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन नहुने गरेका कारण पनि बजेट अभावका कारण नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेका योजनाहरू अलपत्र पर्ने समस्या भएको छ ।
६.कोरोना रोकथामका नगरपालिकाले कस्ता खालका कामहरू ग¥यो ?
जेठ पाँच गते सम्म दैलेख मात्र होइन कर्णाली प्रदेश समेत कोरोना देखिएको थिएन । हामीले नगरपालिका वडा नः १ ३८ जनालाई कञ्चनपुर जिल्लाको पुर्नवास भन्ने स्थान बाट उद्धार गरेर आठबिस नगरपालिका वडा नः १ मा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा निर्माण गरेको क्वारेनटाइनमा राख्यौ । त्यस लगत्तै स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सँग समन्वय गरेर पिसआर परीक्षण गर्दा एक जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो । त्यो बेला प्रतिनिधि सभा सदस्य,नगरपालिका उप प्रमुख लगायतले सरकारले लापारवाही गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्नु भयो । उहाँहरूले विज्ञप्ति निकालेको जस्तो समस्या भएको थिएन । म आफै क्वारेनटाइनमा गएर सङ्क्रमित युवालाई मनोवनल बढाउन काम गरे त्यस पछि जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा हामीले युवालाई सदरमुकाम निर्माण गरेको आइसोलेसन अस्पतालमा पठाऔँ । त्यो सँगै नगरपालिकामा रहेका विद्यालयमा क्वारेनटाइन निर्माण ग¥यौ । नगरपालिकाले आफै २२ सय भन्दा बढीको उद्धार गरेका थियौ । उहाँहरूको पिसिआर परीक्षण गर्नु पर्ने , उहाँहरूको खानपिनको व्यवस्था ग¥यौ । त्यो गर्दा आठबिस नगरपालिकामा कुनै पनि क्षति भएन ।
७.अबको एक वर्ष भित्र के कस्ता खालका कामहरू हुनेछ ?
स्थानीय सरकारको निर्वाचन जाँदा पार्टीले एक घर एक रोजगार भनेर भनेका थियौ । निर्वाचनमा जाँदा हामीले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन सकेन । हामी नगरपालिकामा तीन दलले निर्वाचन जितेका छौ । नगर प्रमुख सहित केही वडा पूर्व एमाले जितेको छ , उप प्रमुख सहित केही वडा नेपाली काँग्रेसले जितेको छ । त्यो सँगै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समेत केही वडा जितेको छौ । हेर्दा सबैको साझा सरकार देखिने र प्रतिपक्ष नभएको जस्तो भए पनि काम गर्न निकै कठिन भएका कारण हामीले भने अनुसार काम गर्न सकेका छैनौ । तर पनि आफूले निर्वाचनको बेला गरे अनुसार ५० प्रतिशत काम गरेका छौ । आगामी दिनमा निर्वाचनमा जाँदा यो यो कारणले काम हुन सकेन भनेर निर्वाचनमा जान्छौ ।
अबको एक वष भित्र हामीले गर्ने काम भनेको अहिले सम्म सञ्चालन भएका विकास निर्माणका कामलाई अन्तिम रूप दिने नै हो । त्यो मात्र गरेको खण्डमा धेरै प्रगति हुन्छ । शिक्षा,स्वास्थ्य खानेपानी क्षेत्रमा त्यति काम ग¥यौ भने केही परिवर्तन हुनेछ ।
८ नगरपालिकाले एच आइभि सङ्क्रमितहरूलाई मासिक भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ त्यो कसरी सम्भव भयो ।
हाम्रो नगरपालिका शिक्षा,स्वास्थ्यका हिसाबले निकै पछाडि परेको नगरपालिका हो । यहाँका अधिकांश युवा देखी वयोवृद्ध समेत रोजगारी लागि काला पहाड जानु पर्ने बाध्यता छ । रोजगारीका लागि भएका युवाहरू बम्मैका गोठिमा जाने र त्यहाँ असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्ने गरेका कारण एच आइभि संक्रमति हुने र घरमा आएर पनि स्वास्थ्य परीक्षण बिनै यौन सम्पर्क गर्ने गरेका कारण श्रीमतीलाई पनि सङ्क्रमित हुने यो समस्याका कारण धेरै जनाले ज्यान समेत गुमाएको अवस्था देखेपछि नगरपालिकामा रहेको एच आइभि सङ्क्रमितको समस्यालाई समधान गर्न आय आर्जनमा टेवा पु¥याउने खालका सिप,र आवश्यक सामाग्री सहयोग गर्ने र थप उनीहरूको पोषण सुधार गरेर जाने उद्देश्यले मासिक चार सय सम्म रकम दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौ । त्यसले गर्दा उहाँहरू खुसी हुनुभएको छ । हामीले पहिलो वर्ष दिन सकेनौ दोस्रो वर्ष बाट नियमित दिँदै आएको छौ ।
९.नगरपालिकाका नगर बासीले नगरपालिका बाट आस गरे अनुसार विकासको अनुभूति गर्न पाएका छन् की छैनन् ?
लामो समय पछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाए । मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएर निर्माण भएका स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि छान्न जनतामा उत्साह थियो । त्यो मात्र होइन सिह दरवारको अधिकार गाउँमा सम्म पुग्यो भन्ने जुन उत्साह थियो त्यो अनुसार विकास निर्माण र अन्य कामको प्रगति हुने थियो त्यो भएको नदेखेपछि जनता प्रति अलि वितृष्णा जागेको अनुभूति मैले गरेको छु । यसो भनिरहँदा पुरै जनता निराश छन् भन्न खोजेको होइन हामीले काम नगरेका पनि होइनौ तर हाम्रा बजेट सीमित मात्रमा छ त्यो अनुसार बजेट विनियोजन गर्दा ठुला कामहरू हुन सकेका छैनन् भने जनताको तीव्र महत्त्वाकाङ्क्षा भएका कारण पनि नगरपालिकाले भने अनुसार काम गरेन की भन्ने छ तर त्यो होइन ।
१०. आठविस नगरपालिकामा तीन वटा महत्त्वपूर्ण गौरवका आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । तर अहिले सम्मको प्रगति हेर्दा सन्तोष जनक पाइँदैन त्यसका लागि तपाईँहरूको पहल के रह्यो ।
आठविस नगरपालिकामा राष्ट्रिय गौरवको मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग जो आठबिस नगरपालिकाको वडा नः १ देखी २ भएर निस्केर अक्षाम जान्छ । त्यो अहिले द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ । र यो आर्थिक वर्ष भित्र कालोपत्रे हुने तयारी छ । त्यसको खास्सै समस्या छैन । अर्को भनेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना हो । जो नगरपालिकाको वडा नः १ मा पर्छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विषयमा केन्द्र सरकारले त्यसको जिम्मेवारी हो । हामीले यहाँ कुनै काममा बाधा उत्पन्न भएको खण्डमा मात्र सहजीकरण गर्ने हो तर पनि हामीले आयोजनाका व्यक्ति सँग किन ढिला भइरहेको छ काम छिटो गर्नुहोस् भनेका छौ त्यो मात्र होइन प्रदेश सरकारलाई समेत यसका विषयमा सङ्घीय सरकार सँग छलफल गरी काम अगाडी बढाउनु पर्ने माग राखेका छौ ।
अर्को भनेको कर्णाली नयाँ सहर आयोजना हो । जो देशभरका १० वटा नयाँ सहर भित्र पर्छ । स्थानीय सरकार गठन हुनु पूर्व मुअव्जा विवादका कारण समस्या भएको थियो स्थानीय सरकार आएपछि त्यो समस्या समाधान तर्फ केन्द्रित छ । त्यहाँ अहिले आयोजनाले विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ । यो आर्थिक वर्षमा ४ वटा टेन्डर गरेर काम अगाडी बढाएको बताएको छ । यो हाम्रो पालमामा केही स्वरूप फेरिन्छ ।